ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: December 2009
အခုကတော့ အတွဲ(၂) ဖြစ်ပါတယ်... (၁)မှ အရမ်းရှည်သွားရင် ဖတ်ရတဲ့သူစိတ်ညစ်သွားမှာစိုးလို့ ခွဲပြီး ဖော်ပြချင်း ဖြစ်ပါတယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို အခြားဘာသာဝင်များ သိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်...သူများဘာသာဆို ရစရာမရှိအောင် မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကားတွေ နဲ့ စွပ်စွဲမယ် မိမိဘာသာရဲ့ မဟုတ်မမှန်မူကို ဖော်ပြရင် အိုး နာလိုက်မှာ ဖြစ်ချင်း ဗုဒ္ဓဝင်စာအုပ်များကို ပြင်လာလိုက်တဲ့ အခါပေါင်းက မရေတွက်နိူင် ဒါတောင် သူတို့မပြင်ခင်လေ ဖော်ပြနေရတာ တချို့ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကို ဘယ်လောက်တောင် ပြင်ပြီးသွားလည်း မသိပါ... ဘယ်ဘာသာမှ မိမိ၏သဘော မိမိစိတ်နဲ့ ရေးသားထည့်သွင်းခွင့်မရှိပါ...... ဒါကို မြင့်မြတ်သော ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသော မိတ်ဆွေများ အားလုံးသိပြီး ဖြစ်ပါမယ်....
ယနေ့ ကျွန်တော်ပြောဆိုရသော အကြောင်းရင်းများသည် လုပ်ကြံပြောဆိုသော စကားတခွန်းမှ မပါပါ....ဗုဒ္ဓကျမ်းစာများ၌ ဖော်ပြထားသော အကြောင်းရင်းများအား ကောက်နုတ်ဖော်ပြချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်....အဲဒီမှ ဆဲပြီးရေးရေးနေတဲ့ ကောင်ဟာ ko thi la ဆိုတာ ကျွန်တော့ ထင်တာပေါ့နော်.... ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့ များပါတယ်..... အခြား ဘာသာဝင်များရဲ့ ကျမ်းဆရာများဟာ မိမိဘာသာအား တိုက်ခိုက်လာလျှင် သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကျမ်းနဲ့ အထောက်အထား ပြန်လည် ဖော်ပြတတ်ပါတယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာ ကြောင်သူတောင်ကြွက်သူခိုး ဂတုံးပြီး ဖာချနေတဲ့(ဘုန်းကြီး)များကတော့ ဆဲဆိုတတ်တာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ပါ..... မိတ်ဆွေတို့လည်း ကြုံဖူးမှာပါ....
ko taw chaw , u need u shame by ur self, no other religious, only ur muslim has f*** back ur mom . whatashame !!!!!
ko thi la yan355@gmail.com
Hey ko taw chaw, pls let me know what's your contact no and address Don't talk about our buddhist. Stop here. Unless you stop, I will make you suck my hardcore dick. OK?
aung aung: (aungthiha2009@gmail.com)
အဆိပ်သီးလေးမောင်ချောရေ အရာခပ်သိမ်းသော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား တဲ့လား ဒါဆိုရင် မင်းအမေ၊မင်းနှမတွေမင်းပြန်လုပ်ကွာ ထွက်လာမယ့်ဟာလေးတွေက ဖန်ဆင်းထားတာလေးတွေပဲ မင်းမှာအပြစ်မရှိပါဘူး :P
aung aung ရေ မင်းအမေနဲ့ မင်းအမကို မင်းပြန်လိုးရင်တော့ သဘောဝကြောင့် ရတယ်ကလေးလို့ ခေါ်တယ်ကွာ ဟားဟား မင်းတို့က သဘာဝက ဆင်းသက်လာတဲ့လို့ ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ တိရစ္ဆာန်တွေ လိုပဲ အမေလဲ မသိ အမလဲ မသိပြန်ယူတာပဲ ဂေါတာမလေ သူ့ညီမကို ပြန်ယူတာပဲ မယုံရင် buddha wiki ထဲမှာ ရှာကြည့် မင်းတို့ ဘုရင် သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင်လဲ အမေကို ပြန်ယူတဲ့ ကောင်ရှိတယ် ဘယ်ဘာသာမှ မရှိဘူး မင်းတိုသဘာဝက ဆင်းသက်လာတဲ့လို့ ပြောတဲ့ ခွေးတိရစ္ဆာန်ဘာသာမှာပဲ ရှိတယ် အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ လက်တည့်မစမ်းပါနဲ့ကွာ အခုခေတ်က တိုးတက်နေပါပြီ
.အဆိပ်သီးလေးရေ မင်းကြည့်ရတာ အနာပေါ်တုတ်ကျသလိုပဲ ငါကရမ်းပစ်တာ ဒဲ့ဝင်သွားသလိုပဲနော် အနည်းဆုံး မင်းအမေအဟုတ်ရင်တောင် မင်းနှမမင်းကြိတ်ဒိုးလေးဆွဲနေပုံရတယ် (မင်းအဖေကြီးကောပါသေးလား .. ဦးစားပေးလိုက်ပါကွ
မင်းတို့အတွက် မထူးပါဘူးကွာ ဒို့မလေးသတင်းစာမှာဆို သမီးကိုပြန်မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေ အမကိုရေချိုးခန်းထဲ မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေအပါတ်စဉ်ပါနေတာ မင်းတို့က ဖန်ခင်ရှင် .. အဲလေ ဖန်ဆင်းရှင် ကြီးကဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဖန်ခင်ကော ဖန်ခင်ကောင် (ထစ်ပြန်ပြီ) ဖန်ဆင်းခံကောင်လေးတွေပဲကွာ ဖန်ဆင်းခံနှမလေးကိုဆွဲတာ ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးအလိုပဲလေ ဆွဲသာဆွဲ ဟဲဟဲ ဘိုင်ဘိုင် (သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကျွန်တော်မေးထားသော အကြောင်းအရင်းများအာ ဖြေဆိုခြင်းမရှိဘဲ ဝှေ့လည်ကြောင်ပတ် စကားတွေနဲ့ သဘောကျ သူလိုပဲ နောက်လိုက်များကလည်း သူများဘာသာရဲ့ အဖေ အမေနဲ့ ပေးစားရတဲ့ စကားလုံးတွေကို သဘောကျ ဒီစကားတွေ ကို ကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့ ရုပ်သဏ္ဍန်ကို ပိုပိုပြီး တွေ့မြင်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.)
Posted by messenger at 6:12 PM
Posted by messenger at 4:35 PM
Labels: ကြီးလိုက်ကြီးလားဟ, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, အမေးအဖြေ